Ndị China zụụrụ ahịa ziri ezi n'Africa tupu ọbịbịa ndị nyocha Europe - AFRIKHEPRI
Ndị China na-azụ ahịa ahịa ziri ezi n'Africa tupu ọbịbịa ndị nyocha Europe
Akwụkwọ ozi sitere n'aka Hugo Chavez na Africa: "ka anyị mee otu mmadụ, otu kọntinent"
Zheng He, makwaara dị ka Cheng Ho - onye ndị China na-akwanyere ùgwù ji ụgbọ mmiri buru ibu nke ụgbọ mmiri 200 ruo 300 na Indian Ocean na 1418. Azụmaahịa buru ibu. Site na otu n'ime njem ndị a, o si Malindi, obodo nta Swahili (nke a bụ KENYA ugbu a) weghaara giraff, nke edere na China dị ka ihe atụ nke akụkọ ọdịbendị Qilin. Afrịka nwere ihe ndị China chọrọ: ọgwụ ọdụm, mmanụ na-esi ísì ụtọ, osisi osisi na anụ ọhịa osisi. Zheng O weghachite ọdụm, ihe ịchọ mma, nilganias, ịnyịnya ọhịa na ostriches si Africa maka ọla edo, ọla ọcha, poselin na silk.
Ndị China achọghị ịmepụta ntọala nke aka ha na mba ahụ kama ha nwere olileanya ime ka onye ọ bụla nwee mmasị na mmepeanya ha. Ọ bụ n'ime mmụọ a ka ndị agha mmiri ndị China akwataghị, (n'adịghị ka ndị Europe) steeti ndị gara n'ihi na Zheng He na alaeze ukwu agaghị achọ ndị ohu ma ọ bụ ọla edo ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ ngwa nri.
Da Ming Hun Yi Tu, bụ map nke Ukwu Ukwu Ming (China oge ochie)
Ekepụtara ya na China na 1389, ma gosipụta ọdịdị Africa nke ọma, ihe karịrị otu narị afọ tupu ndị ọrụ nyocha Europe na ndị na-ese ihe nkiri rute kọntinenti ahụ. The Da Ming Hun Yi Tu malitere site na 100, nke doro anya bụ maapụ kacha ochie n'ụwa nke ji ikwesị ntụkwasị obi gosipụta ịdị adị nke mpaghara Africa.http://fr.wikipedia.org/wiki/Da_Ming_Hun_Yi_Tu (nke di n’elu map ụwa nke Admiral Zheng He sere sere)
Ihe omumu ihe omuma
Otu ndi China gwuputara ihe nlere na Kenya huru ihe ngosi nke 15th na Chinese na Mambrui - obere obodo nke edere edeghi na Malindi na edere edere Kenya.
"Ọ bụ naanị ndị ozi si n'aka eze ukwu, Chengzu, mere" iberibe ndị a. (N’agbata 1403-1424)
Afọ ole na ole gara aga, ndị ọkụ azụ nọ na ọdụ ụgbọ mmiri Kenya dị na North Lamu raara ọzara ndị China na narị afọ nke 15, ndị ọchịchị China anwalela DNA na ọtụtụ ndị obodo na-ekwu na agbụrụ ha si. Chinese.
Nnwale ndị a yiri ihe na-egosi na ihe ndị obodo ahụ kwenyere na ha bụ - na ụgbọ mmiri ndị Zheng He ụgbọ mmiri rutere n'oké mmiri na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ dị ndụ lụrụ, nke a pụtara na ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ ka nwere njiri mara China.
China ji ahia na nkwanye ugwu zụọ ahịa na Afrịka, ọ chọghịkwa ịchịkwa ya, irigasị ihe ndị dị n'ime ala ma ọ bụ buru ohu na Africa. n’adịghị ka ndị ndị West, ndị bịara otu narị afọ…
Ọcha na-acha anụnụ anụnụ na ink ink - Natou Pedro Sakombi
Lelee nnukwu ndị na-arụ ụka (2007)